LH-BM500L2Layers Blow Molding Machine မိတ်ဆက်
1. စွမ်းအင်ချွေတာသော လေမှုတ်ပုံသွင်းစက်၏ အကျဉ်းမိတ်ဆက်- ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်သော လေမှုတ်ပုံသွင်းစက်သည် ရှည်လျားသော အချင်းဝက်အူ၊ ZLYJ အမျိုးအစား အထူးမာကျောသော သွားမျက်နှာပြင်ကို လျှော့ချပေးခြင်း၊ ကြိမ်နှုန်းပြောင်းပေးသည့် လေးဝင်ရိုးမော်တာ၊ သိုလှောင်မှုအမျိုးအစား ခရုပတ်ရောစပ်ခေါင်း၊ ကောင်းမွန်သော ပလပ်စတစ်ဆာဂျရီပြုလုပ်ခြင်း ထိရောက်မှု။scr...
အခေါင်းပေါက်မှုတ်စက်၏ နံရံအထူထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပါ။
ပလပ်စတစ် ကွန်တိန်နာများ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ပုံသွင်းနည်းများစွာ ဖြစ်သည့် အခေါင်းပေါက် မှုတ်ပုံသွင်းခြင်း၊ ဆေးထိုးပုံသွင်းခြင်း၊ လှည့်ပတ်ပုံသွင်းခြင်း၊ ဖိသိပ်ခြင်း နှင့် အအေးခံခြင်း ကဲ့သို့သော ပုံသွင်းခြင်း နည်းလမ်းများစွာ ရှိပါသည်။ပလပ်စတစ်ပုံးများအတွက် ပုံသွင်းနည်းများစွာထဲမှ အခေါင်းပေါက်မှုတ်ပုံသွင်းခြင်းနှင့် ဆေးထိုးပုံသွင်းခြင်းတို့သည် t...
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Blow Modling စက်ကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ။
လေမှုတ်ပုံသွင်းစက်များကို လေမှုတ်ပုံသွင်းစက် အမျိုးအစားသုံးမျိုး ခွဲခြားနိုင်သည်- ဆေးထိုးပုံသွင်းခြင်း၊ ထုထည်နှင့် အထူးဖွဲ့စည်းပုံတို့ကို ခွဲခြားနိုင်သည်။ပလပ်စတစ်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းတွင် ဆေးထိုးမှုတ်စက်များနှင့် ထုထည်မှုတ်ထုတ်စက် နှစ်ခုစလုံးသည် အလွန်အရေးကြီးသောကြောင့် ...
လေမှုတ်ပုံသွင်းစက် လည်ပတ်မှု ညွှန်ကြားချက်
လေမှုတ်ပုံသွင်းစက် လည်ပတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် 1. လေမှုတ်ပုံသွင်းစက်ကို နာရီလက်တံအတိုင်း လှည့်ပြီး ၎င်းကို အလျားလိုက်အနေအထား (OFF အခြေအနေ) မှ ဒေါင်လိုက်အခြေအနေ (ON state) သို့ပြောင်းရန် 2. အစိမ်းရောင်ပါဝါခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ control pane ပေါ်မှာ...